ဝက်ခြံပေါက်နေရင် ဒါတွေကိုမလုပ်နဲ့နော် | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဝက်ခြံပေါက်နေရင် ဒါတွေကိုမလုပ်နဲ့နော်
ဝက်ခြံဆိုတာကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းရော ကောင်လေးတွေတိုင်းရောမဖြစ်ချင်တဲ့ အရာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ခြံတွေရှိနေရင် သေးသေးကြီးကြီး စိတ်ပျက်ရတယ်လေ။ တစ်ချို့ဆိုရင်ဝက်ခြံက အရမ်းပြင်းထန်လွန်းတော့ အသားရေတွေပါနာတာတွေဖြစ်တာမို့ကြောက်ကြတယ်လေ။ ဝက်ခြံကုနည်းတွေကတော့ အများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ သောက်ဆေးလိမ်းဆေး treatment တွေ စသဖြင့်မျိုးစုံနဲ့ကုသနိုင်တာမို့လို့ အချိန်တစ်ခုသာပေးလိုက်ရင် ပျောက်ကင်းဖို့က ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်နော်။ ဆေးတွေလည်းကုနေတယ် ပြီးတော့ ဝက်ခြံတွေကလည်းမသက်သာဘူးဆိုရင် စိတ်ထဲမှာထင်ကြတာက ဆေးကမထိရောက်ဘူးပေါ့။ ကိုယ်နဲ့မသက်သာဘူးထင်ကြပါတယ်။ တစ်ခြားသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်း ပျောက်ကင်းဖို့ကကြာနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့လိုကိုယ်ကမသိလိုက်ဘဲ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြုမူလိုက်တာလေးက ဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မိရင် ဝက်ခြံတွေကို ပိုဆိုးရွားနိုင်စေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။
ချောကလက်စားတာနဲ့ဝက်ခြံတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေက အသားရေကိုပွယောင်းယောင်းဖြစ်စေပြီးတော့ အသားရေရဲ့အဆီကိုပိုထွက်စေပါတယ်။ အသားရေကတင်းတင်းရင်းရင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ ဖောင်းနေတတ်ပါတယ်။
မျက်နှာကို မကြာခဏဆိုသလို ဆေးကြောနေတာကလည်း အသားရေကိုနီမြန်းစေပြီးတော့ ပွတ်တိုက်တာတွေကလည်း ဝက်ခြံတွေကိုပိုဆိုးဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ တစ်နေ့ကို သိပ်မပြင်းတဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ နှစ်ကြိမ်သစ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ပုဝါလေးနဲ့ ခြောက်သွားအောင်သုတ်ပေးပါ။
၃. လက်နဲ့ညှစ်တာတွေကို ဆင်ခြင်ပါ
ဝက်ခြံကိုညှစ်တာဆိုတာကတော့ အကောင်းဆုံးအရသာအရှိဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုခုကစပြီးဖျောက်ပစ်လိုက်ပါတော့။ ဝက်ခြံတွေကိုညှစ်တာကတော့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလက်ယပ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ အဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ဝက်ခြံတွေကိုနီမြန်းစေပြီးတော့ အချိန်ကြာတဲ့အခါမှာ အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေကဝက်ခြံတွေကိုဖုံးဖို့အတွက် မိတ်ကပ်တွေကိုအများကြီးလိမ်းကြပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်တာက ဝက်ခြံတွေကိုပိုဆိုးစေပြီးတော့ ပိုထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ကမိတ်ကပ်လိမ်းချင်ရင်တောင် ဆရာဝန်နဲ့သေချာပြောပြပြီးတော့ညွှန်းပေးတဲ့ဟာတွေကို စနစ်တကျသုံးပေးပါ။
နေရောင်ခြည်ကတော့ အသားရေကိုပြင်းထန်တဲ့ဆိုးရွားမှုတွေပဲပေးတယ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိကြပါတယ်နော်။ အချိန်ခဏလေးထိတွေ့တာမသိသာပေမယ့် အချိန်တော်တော်ကြာနေရောင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင်တော့ဝက်ခြံတွေကိုပိုဆိုးနိုင်တဲ့အပြင် နီမြန်းစေနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ထဲထွက်ခါနီးရင် SPF 15 အနည်းဆုံး ပါတဲ့ sunscreen ကိုလိမ်းပေးပါ။
ဒါလေးတွေကတော့ ဝက်ခြံကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေတဲ့အချိန် ဝက်ခြံထွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ မလုပ်မိစေဖို့ဆောင်ရန်အချက်လေးတွေပါ။